မောငျ(စှယျစုံကမျြး): ဓါတ်ပုံပေါ်မှာ အသံလေးတွေတွင်းပေးနိုင်တဲ့ Clarisketch.Apk size(2.08MB)
ဓါတ်ပုံပေါ်မှာ အသံလေးတွေတွင်းပေးနိုင်တဲ့ Clarisketch.Apk size(2.08MB)
ဒီဖုန်းဆော့ဝဲလ်လေးကို လူတိုင်းသိပြီးသားဖြစ်နေမလားမသိဘူးနော် ကျွန်တော်တွေ့တာတော့ကြာပြီ အင်တာနက်လိုင်းမကောင်းလို့မတင်ဖြစ်ခဲ့ဘူးခင်ဗျ။ ဒီကောင်လေးကတော့ ဓါတ်ပုံတွေပေါ်မှာ အသံဖိုင် ၂မိနစ်အထိ အသံတွင်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ ဒါ့အပြင် အသံတွင်းနေတဲ့အချိန်မှာ ဓါတ်ပုံပေါ်မှာလက်ဖြင့် စာများကိုရေးဆွဲနိုင်ပါတယ် ကဲအသံလေးတွေတွင်းပြီး သူငယ်ချင်းတွေဆီကိုပို့လို့လည်ရပါတယ်ခင်ဗျာ
- Added new drawing tools: arrows, oval, rectangle.
- Addedapossibility to switch off zoom and pan during stylus usage to Settings.
- Addedapossibility to hide menu by taping outside.
Author AungKyaw at 7:47:00 PM